Fisafoana tany Ampanihy :: Kitozan-tsokatra 250 kilao saron’ny zandary • AoRaha
Fisafoana tany Ampanihy Kitozan-tsokatra 250 kilao saron’ny zandary
Nifanena tamin’ny zandary nanao fisafoana tany amin’ny distrikan’Ampanihy ny andian-olona maromaro nitondra entana tamin’ny gony, tamin’ny alarobia 5 febroary lasa teo. Nirifatra nandositra ireo andian-olona, vantany vao nahita an’ireo mpitandro ny filaminana. Tavela teo ny gony efatra ambin’ny folo feno henan-tsokatra efa maina efajato isa, izay milanja 250 kilao, sy sokatra velona miisa fito.
Fantatra fa tany amin’ny kaominina Androhipano no toerana namonoana an’ireo sokatra ireo sy nanamboarana ny kitoza. Nodorana teo anatrehan’ny manam-pahefana any an-toerana avy hatrany ireo kitozan-tsokatra marobe.
Tsy vao sambany ny fahatrarana tranga famonoana sokatra an-tsokosoko tahaka izao tany amin’iny faritra Ampanihy iny, araka ny nambaran’ny loharanom-baovao avy any an-toerana. Efa nisy ny olona voasambotra sy naiditra am-ponja, tamin’ny taona 2019. Vao nisy olona telo hafa ihany koa no tra-tehaka, avy eo nogadraina tamin’ny fahatrarana sokatra velona enimpolo sy kitoza 250 kilao, tamin’ny fiantombohan’ity taona 2020 ity.
Raha ny fikasana fanondranana sokatra an-tsokosoko mankany ivelany no tena fahita matetika, dia miha mahazo vahana any amin’iny faritra atsimon’ny Nosy ihany koa, tato ho ato, ny famonoana sy fanaovana sakafo an’io karazana biby mitady ho lany tamingana eto Madagasikara io. Misy hatrany ny fanamafisana ny lafiny fiarovana ny sokatra, indrindra ny fisavana ataon’ireo mpanara-maso ny ala ary ireo mpitandro ny filaminana, ka isan’ny ahazoana an’izao vokatra izao.
Fisorohana kolikoly :: Hotsingolohan’ny Bianco fatratra ireo tsenan-draharaham-panjakana